Somaliland: Hoggaamiyaha Kooxda Khaatumo Cali Khaliif Oo Lagu Soo Dhaweeyay Calanka Soomaaliya - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Hoggaamiyaha Kooxda Khaatumo Cali Khaliif Oo Lagu Soo Dhaweeyay Calanka Soomaaliya
Dr Cali Khaliif Galaydh hoggaamiyaha Khaatumo oo dhawaan ka dhoofay magaalada Hargeysa ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Minnesota ee carriga Maraykanka. Lama oga ujeedada socdaalka Dr Cali Khaliif ku tagay Maraykanka oo uu dhalashadiisa haysto laakiin, waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay bulsho sidata calanka Soomaaliya iyo kan Maraykanka.
Sawirrada soo dhawaynta Dr Cali Khaliif ayaa muujinaya dadka soo dhaweeyay oo sita calanka Soomaaliya iyo kan Maraykanka. Cali Khaliif ayaa muddooyinkii u dambeeyay sheegayay in aanay Muqdisho iyo Garoowe midna waxba ka sugayn taa bedelkeedana ay Hargeysa tahay halka kaliya ee wax u ogol.
Dr Cali Khaliif ayaa intii Madaxweyne Muuse talada hayay dhawr goobood ka sheegay in heshiiskii Somaliland iyo Khaatumo ee xukumaddii Siilaanyo u baahan yahay in la fuliyo, islamarkaana fursadda ugu weyn ee midnimada Somaliland taaggan tahay, hase ahaatee arrintaasi kama jawaabin Madaxweyne Muuse iyo xukumaddiisa toona.
Dr Cali Khaliif ayaa ka hor intii aanu dalka ka dhoofin socdaal ku soo maray degaanno ka tirsan Buuhoodle iyo gobolka Sool, halkaas oo uu kulamo kula soo qaatay waxgaradka bulshada hase ahaatee faahfaahin badan lagama bixin natiijada socdaalkiisa inkasta oo uu ku soo beegmay xilli xurguf siyaasadeed ka taaggan tahay degmada Tukaraq oo dhawaan ciidamada Qaranka Somaliland qabsadeen.
Madaxweyne Muuse oo aan magacaabista xukumaddiisa lagu arag saami qaybsi fulinaya heshiiska Khaatumo ee ay xukumaddii hore ee Kulmiye gashay ayaa laga dhursugaya sida uu ula macaamilo bulshada bariga Somaliland oo codka ugu badan siisay xisbiga mucaaradka ah ee Waddani, iyada oo Cali Khaliif ku adimayo in wixii ka xumaada heshiiska aanay masuuliyaddiisa lahayn bulshada gobollada Bariga Somaliland.
Somalia: Dhinacyada Maamulka Muqdisho Oo Sheegay Qaabkay Xildhibaannada Somaliland U Xulanayaan